Steel ntupu, oruru Bar ntupu, Steel Waya - Meijiahua Corporation
Steel eriri igwe & mpempe akwụkwọ
Tianjin Meijiahua Steel bụ otu ìgwè nke akụ na ụba ụwa, gụnyere ụlọ ọrụ mmekọ. Nlụpụta: TIANJIN TIANKANG metal PRODUCT CO., LTD, TIANJIN TONGFU metal PRODUCT CO., LTD. Export Trading ụlọ ọrụ: Tianjin Meijiahua Trade CO., LTD. HK ụlọ ọrụ: Meijiahua Trade CO., LIMITED. E guzobere Meijiahua corporation steel na 1999, ọ bụ otu n'ime otu ndị na-emepụta nke nyocha & mepee WIRE, MESH, PIPE, SCREW na China. Anyị nwere iri abụọ mmepụta akara.
IHE EME NA-EME NA EBERE
Welded pipe n'elu quenching na tempering okpomọkụ ọgwụgwọ na-emekarị rụrụ site na itinye n'ọkwa okpomọkụ
A na-ejikarị ikpo ọkụ ọkụ ma ọ bụ kpo oku ọkụ eme ya. Isi teknụzụ ndị ahụ bụ ekweghị ekwe, ịdị ike mpaghara na ịdị omimi dị omimi. Ule siri ike nwere ike iji Vickers hardness tester, nwekwara ike iji Rockwell ...
Ozi ọma! Ejirila ụlọ ọrụ nke 3 waya bonder rụọ ọrụ nke ọma!
N’April 30, 2018, mgbe ọnwa ole na ole gwụsịchara, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ a zụrụ ọhụrụ nke 3 mechine arụ ọrụ gara nke ọma, onye isi ụlọ ọrụ ahụ ndị isi ndị ọzọ sonyere na mmepụta nke mpempe waya izizi mbụ. Enwere ike iji akụrụngwa ahụ maka nnukwu ihe ...
Onye ahịa ahụ si Australia, Singapore, Thailand bịara ụlọ ọrụ anyị maka nyocha ụbọchị abụọ na nleta.
Onye ahịa ahụ si Australia, Singapore, Thailand bịara ụlọ ọrụ anyị maka nyocha ụbọchị abụọ na nleta. Ha lekwasịrị anya na eriri igwe anaghị agba nchara nke 1x61mm, ∮42mm, N'oge nyocha ahụ, ndị ahịa gara leta mpaghara mmepụta ma lee usoro mmepụta nke stainles ...
Mpaghara Mpaghara Tuanbo, Jinghai County, Tianjin, China